Concept UFO သည် Nintendo Switch ၏တိုက်ရိုက်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်နိုင်သည် Gadget သတင်း
Rafa Rodríguez Ballesteros | | consoles စ, ဖြစ်ရပ်များ, NOTICIAS, ဂိမ်းတွေကက
ဒါဟာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖြစ်အပျက်တွေမှာငါတို့ရှာဖွေနေတာဖြစ်တယ်၊ စျေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်သည့်ကက်တလောက်ထဲသို့ထည့်မည့်ပစ္စည်းအသစ်များနှင့်ကိရိယာများ။ ဒါဆိုရင်, အစိတ်အပိုင်းများကွန်ပျူတာများ Dell ၏လူသိများတဲ့ထုတ်လုပ်သူကနေ ကျွန်တော်တို့ဟာအကျွမ်းတဝင်ရှိတဲ့ကိရိယာတစ်ခုအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ခဲ့တယ်၊ အယူအဆ UFO.
သာ ဦး စားပေးပေမယ့် ၎င်းသည်ရှေ့ပြေးပုံစံဖြစ်သည်, အရာအားလုံးကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်၌တည်ရှိ၏ဖော်ပြသည်။ ထို့အပြင် ၂၀၂၀ တစ်လျှောက်လုံးတွင်ဆိုင်အားလုံးသို့ရောက်ရှိနိုင်လိမ့်မည်ဟုလည်းဆိုနိုင်သည်။ display နှင့်အတူ console ကို Nintendo ကြောင်း "ကစားသမား" ၏အမျိုးမျိုးသောစက်ဝိုင်းဖမ်းမိသိရသည် စျေးကွက်တွင်တိုက်ရိုက်ပြိုင်ဘက်ရှိခြင်းနှင့်အလွန်နီးကပ်သည်.
Concept UFO သည် Switch အတွက်တိုက်ရိုက်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်သည်
ပုံများတွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း Concept UFO ကိုခေါ်နိုင်သည် Dell ရဲ့ Nintendo ပြောင်းပါ။ ၎င်း၏ပုံစံကိုခြေရာကောက်လျက်, အများပြည်သူကရည်ရွယ်ထားသော, တူညီသည်။ Dell ကဤကဏ္inတွင်ပါဝင်လိုသည့်ဆန္ဒနှင့် ပတ်သက်၍ အချက်အလက်အနည်းငယ်သာပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ထိုအခါမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်လျှင် အနန္တတန်ခိုးရှင်စစ်မှန်တဲ့ကမ္ဘာကိုရပ်တည်နိုင်မှာပါ.
ယခုငါတို့ console ကိုတစ် ဦး ရှိလိမ့်မည်ဟုငါတို့သိကြ၏ ၈ လက်မမျက်နှာပြင်နှင့် 8p resolution တို့ဖြင့်ဖော်ပြသည်။ ထိုအ ဘေးထွက်ထိန်းချုပ်မှုများအရာလည်းဖြစ်ကြသည် ဖြုတ်လို့ရတယ်, အခြေခံထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်, ဒါမှမဟုတ်တစ် ဦး ထက်ပိုသောပြည့်စုံထိန်းချုပ်မှုအတွက်အတူတကွအလုပ်လုပ်ကြသည်။ ငါ mount လုပ်မည့်ချစ်ပ်အတွက်မူ၎င်းသည်aဖြစ်လိမ့်မည်ကိုသာသိသည် XNUMXth Gen က Intel.
အဲဒါကိုရေတွက်လို့ရလား ထိုကဲ့သို့သောသေးငယ်တဲ့ခရီးဆောင်ကိရိယာအတွက်တစ် ဦး Alienware pc ၏အပေါငျးတို့သပါဝါ? ဒီသပိတ်မှောက်တဲ့စီမံကိန်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ပြီး Concept UFO ဖြစ်လာရင်၊ Windows 10 သေးငယ်သည်ဒါပေမယ့်အစွမ်းထက် အများဆုံးတောင်းဆိုမှုများဂိမ်းများကို run နိုင်စွမ်း.
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆက်သွယ်မှုကိုကြည့်ပါကဖြစ်နိုင်ချေများစွာရှိသည်။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း Concept UFO သည်ထူးခြားလိမ့်မည် Bluetooth ဆက်သွယ်မှု၊ ဝိုင်ဖိုင် နှင့်ပင်တစ် ဦး နှင့်အတူ Thunderbolt ဆိပ်ကမ်း။ အဲဒါလည်းရှိလိမ့်မယ် USB port များ ၎င်းတို့ကိုသမားရိုးကျပီစီအဖြစ်သုံးရန် mouse သို့မဟုတ် keyboard များကိုဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ငါတို့ရင်ဆိုင်နေရပြီလား ဂိမ်းကစားသူများအတွက်ကွန်ပျူတာအသေးစား? Nintendo ဗီတာမင်ခလုတ်? ဤအမျိုးအစားသည်စျေးကွက်တွင်ကွာဟမှုရှိနိုင်သည်ကိုသင်မြင်ပါသလား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » NOTICIAS » Dell သည် NFO ၏“ version” Concept UFO ကိုတင်ပြသည်